Post Frequency vs. Number of Visitors - Calm Hill
Post Frequency vs. Number of Visitors
ဘလော့ကိုလာတဲ့လူ များဖို့အတွက်ဆိုတာက ကိုယ်ရေးတဲ့စာအပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ် ရေးထားတဲ့စာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူများမှ လာတဲ့လူများမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့စာကောင်းပေမယ့် တစ်လနေလို့တစ်ခုလောက် ရေးပြန်ရင်လည်း လူကလာချင်မယ်မဟုတ်ဘူး လို့လည်းထင်မိပြန်တယ်။
ဒီနေ့မှ စိတ်ကူးပေါက်လို့ မစစ်တာကြာတာ့ Statistics တွေကိုပြန်စစ်ကြည့်မိပါတယ် ပြန်စစ်ကြည့်တော့ ဘလော့အခြေအနေက အတော်ဆိုးဝါးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ StatCounter ကမှတ်တမ်းအရက Page Loads, Unique Visitors, First Time Visitors and Returning Visitors ဆိုပြီးတော့ သူကလာသမျှကို စာရင်းကောက်ထားပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိန်းဂဏန်းတိုင်းတော့ မှန်နိုင်ပါဘူး ရေတွက်ပုံက IP နဲ့တွက်တာဆိုတော့ Dynamic IP တွေကပဲ များလေတော့ First Time နဲ့ Returning ဆိုတာက ကိန်းပဲရှိမယ် သိပ်ပြီးမှန်ဖို့မရှိပါဘူး။
Page Loads, Unique Visitors, First Time Visitors and Returning Visitors တွေကို ဒီနှစ်အစလောက်ကစပြီးတော့ တစ်ပါတ်စီရေတွက်ပြီးတော့ ဂရပ်ဆွဲကြည့်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ပုံအရဆိုရင်တော့ လူဝင်တဲ့အရေအတွက်ဟာ တက်တဲ့အခါတက် ကျတဲ့အခါကျနဲ့ ဖြစ်နေပြီးတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် အကျဘက်ပဲရှိပါတယ်။
ဒါနဲ့စာရေးတဲ့ အရေအတွက်ကိုလည်း တစ်ချက်ပြန်စစ်ရပါတယ် ကိုယ်စာရေးတဲ့ ပမာဏဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုပြီး တစ်ပါတ်စီအခြေခံပြီး ရေတွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း ထွက်လာတဲ့ပုံအရ စာရေးအားပမာဏအင်မတန် ကျဆင်းသွားပုံရပါတယ် အပါတ်စဥ် Post အရေအတွက်ဟာ အတက်ကိန်းမရှိပဲ အကျကိန်းပဲဦးတည်နေပါတယ်။
စာရေးတဲ့ ပမာဏနဲ့ လာလည်တဲ့လူအရေအတွက် အတက်အကျများ ဆက်စပ်မှု့ရှိမလားလို့ ထပ်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Page Loads, Unique Visitors, First Time Visitors and Returning Visitors ထဲကဘယ်ဟာနဲ့ တိုင်းမလဲလို့ စဥ်းစားကြည့်တော့ သူတို့ရဲ့ Data ပုံစံတွေက ပြောမယ်ဆိုရင် အကုန်အတူတူပါပဲ ဒါကြောင့် တစ်ခုထဲကိုမသုံးတော့ပဲ အားလုံးကိုပဲ Average ယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Post Count နဲ့ယှဥ်လို့လွယ်အောင် ပမာဏကိုလျော့ချချင်လို့ သုညတစ်လုံးလျော့အောင် လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Linear ပုံစံနဲ့ ဆွဲကြည့်တဲ့နေရာမှာ Post Count ရော Average Visit ရောနှစ်ခုလုံးရဲ့ Trend Line ဟာအကျဘက်ကို အတူတူဦးတည်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆက်စပ်တယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ခြားသော နည်းများနဲ့ ထပ်ပြီးဆွဲကြည့်ပြန်ပါတယ် Log Trend Line မှာလည်း မျဥ်ကွေးပုံစံဟာ အတော်ကိုတူညီပါတယ် ဒါကြောင့် Linear ပုံထက်ပိုပြီး ဆက်စပ်မှု့ရှိကြောင်း ပိုပြီးပြနိုင်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မျဥ်းဖြောင့်အနေနဲ့ထက် ထပ်ကိန်းတွေကိုမြှင့်ကြည့်ပါတယ် နောက်ဆုံး ၆ ခုအထိမြှင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ ထွက်လာတဲ့ မျဥ်းကွေးနှစ်ခုဟာ အတော်လေးကို တူညီကြောင်းတွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ဘလော့မှာတော့ Post အရေအတွက်နဲ့ Visitor အရေအတွက်ဟာ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီးစဥ်းစားစရာတစ်ခုက အရေအတွက် များတိုင်းလူများတယ် ဆိုတာကတော့ အင်မတန်အကြမ်းထည် ဆန်လွန်းပါသေးတယ် ဘယ်လို Post အမျိုးအစားဆိုရင် လူပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသလဲ စသည်ဖြင့်ထပ်ပြီး အသေးစိတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ Post တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Read Count ကိုမှတ်ထားတဲ့ Data မရှိတဲ့အတွက် တိုက်ရိုက်ဆန်းစစ်ကြည့်လို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ သွယ်ဝိုက်သော နည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ရှိတဲ့ Data ထဲကနေပဲ Post Count ကနေ Tag အမျိုးအစားနဲ့ ရေတွက်ပြီးပြန် ဆန်းစစ်လို့တော့ရနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ လူဝင်တာနည်းလို့ များလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး Analyze လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း မျဥ်းလေးဆွဲကြည့်ရုံပဲရှိပါတယ်။ စုဆောင်းထားတဲ့ Data အနည်းအများ အပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးနည်းလာ များလာတာကို ပြောချင်တာပါ အကယ်၍သာ လူအဝင်အထွက်အရေအတွက်တွေ မှတ်ထားတဲ့ Data တွေမရှိဘူးဆိုရင် ဒီလိုဆန်းစစ်မှု့မျိုးတွေ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ခြောက်လဆိုတဲ့ ပမာဏဟာ မကြာပါဘူး ရလာတဲ့ Data ပမာဏဟာလည်း မများလှပါဘူး ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့အမျှများလာမယ် ဆိုရင်တန်ဖိုးကြီးလာပါတယ်။ Facebook မှာဖြည့်ထားတဲ့ နာမည်၊ လိပ်စာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ အီးမေး၊ ကစားတဲ့ဂိမ်းတွေ ဒါတွေက ကိုယ့်တစ်ယောက်အတွက် များတယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လိုလူ သန်းချီရှိသွားရင်တော့ တန်းကြေးများလွန်းသွားတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ Quantitative Data တွေနဲ့ ငွေရှာနေတဲ့လူတွေ အများကြီးပဲမဟုတ်လား။